Alahady 17 Novambra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 17 Novambra 2019
Alahadim-bokatry ny Sampana Mpanazava sy Tily
Nitondrana amim-bavaka ny Fivondronana Herin’ny F amonjena 10A
« Ho avy amin’ny heriny ny Tompo »
Niantomboka tamin’ny 9 ora maraina ny fotoana aninkeo. Niavaka ny androany noho ny alahady nasionaly SAMPATI hitondrana amim-bavaka ny fivondronana Herin’ny Famonjena 10 A. Ny feo-njavamaneno fidirana dia hira skoto “An-dala-mazava”. Atoa Do Van Khac Francky no nitarika ny fotoana. Natolotra sy narahabaina ary nisaorana ny Mpitandrina hitory Teny, dia Atoa Randriamanantena Solo Jean Jacques Séraphin Johns, Mpitandrina,Tonian’ny SAMPATI Foibe FJKM. Ny programa avy amin’ny SAMPATI eran’ny Madagasikara no nampiasaina nanarahana ny litorjia endriny voalohany.
Ny SAL 105 : 1-5 no niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika. Ny hira fanevan’ny jobily faha-200 taonan’ny Sekoly FJKM « Mahareta » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’ Andriamanitra araka ny SAL 66 : 7 ; HOS 12 : 7. Natao ny hira FFPM 409 : 1-2 « Ry zaza mpiodina mba miverena » dia nisy vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 403 “Ry Jesoa Tompo tsara ô!” nialoha ny Teny famelan-keloka nomena ny Fiangonana teo am-pitsanganana ao amin’ny JER 15 : 19. Nohiraina ny FFPM 307 : 1-3 “Iza no hanompo” dia notononina ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy.
Zoky Razafindrasata Abel, mpampianatra Sekoly Alahady no nanatanteraka izany fotoana izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanompanana ny fampianarana fohy dia ao amin’ny EKS 20 : 12. Tenin’Andriamanitra natao hampiharina. Nasainy novakian’ny Fiangonana izany. Anisan’ny didy 10 nomen’Andriamanitra ny fanajana ray aman-dreny. Ny tsi-fanajana ray aman-dreny dia ahazoana tsiny, fahafaham-baraka, ahitana loza amin’atambo. Santionany amin’ny fomba anehoana izany fanajana izany dia mila miarahaba, manao azafady, mihaino sy mankato ny anatry ny olon-dehibe. Sehatra voalohany ahafahana manao izany dia ao an-trano, any am-pianarana, aty am-piangonana. Mahazo fitahiana sy fahasoavana manokana avy amin’Andriamanitra isika rehefa manja ray aman-dreny. Andeha isika hampihatra izany rehefa mirava.
Natsangana ny fianakaviamben’ny Sampana Sekoly Alahady nanao ny hira FFPM 787 : 3 “Izay mahakolokolo”. Nisy vavaka.
Rehefa izay dia nanao ny tatitry ny asan’ny SAMPATI ANDRIAMAHATANA Christian. Ny sampana manontolo no indray niredona ny hira “Fifaliana tena mamiko” taorian’izay ary nitohy tamin’ny filazana ny vaovaom-piangonana ny tompon’ajara amin’izany.
Rtoa Rakotomanana Andrimbazotiana no nanatanateraka ny famakiana ny asa tamin’ny Fiangonana. APO 3 : 11 no nanombohany izany filazana izany. Nisy vahiny natsangana sy narahabaina.
Ireto manaraka ireto no santionany amin’ireo asa ilaina fantarina, entina amim-bavaka sy hotanterahana :
Ivelany : Fanompoam-pivavahana hatao amin’ny teny anglisy (isam-bolana) eny amin’ny Paroisse Internationale Andohalo ny alahady 24 novambra 2019 8 ora hatramin’ny 9 ora sy sasany maraina, hisy fandraisana ny Fanasan’ny Tompo
Anatiny : Alahadin’ny zanaka am-pielezana amin’ny alahady 24 Novambra 2019 noho izany dia haroso anio ny ankatoky ny fandraisana.
Talata 29 novambra 2019 amin’ny 2 ora tolakandro fivoriambe faharoan’ny Dorkasy hiresahana ny tetibola 2020
fanentanana avy amin’ny firaisan’ny sampana amin’ny fandraisana anjara amin’ny herinandro sambatra amin’ny 24 desambra 2019 (sabotsy 30 novambra 2019 ny famerenana voalohany)
fizarana valisoa ireo zanaky ny Fiangonana afa-panadinam-panjakana sy nandalo fiofanana tao amin’ny SETELA sy SEFALA ny alahady 15 desambra 2019 karakarain’ny STK Zokiny (alahady 8 desambra 2019 no fara-fisoratana anarana)
Rehefa izay dia nandray fitenenana Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina. Nisaotra an’Andriamanitra izy nahatanterahan’ny fotoana androany sy ny tompon’anjara rehetra, indrindra ny SAMPATI izay mankalaza an’ Andriamanitra noho izao ivon’ny herinandrom-bokatra izao. Fanentanana ny Fiangonana hanome entana hatolotra ny Mpitandrina sy ny ankohonan’ny Mpianatra ho Mpitandrina any amin’ny TPM Fianarantsoa no natao. Nambara fa tontosa soa aman-tsara omaly sabotsy 16 novambra 2019 ny fivoriambe faharoan’ny Firaisan’ny Loholona sy ny Diakona (FDL) eto anivon’ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana (SPAA 10) ary ny vahiny izay efa narahabaina dia mbola horaisin’ny tompon’andraikitra eny amin’ny Akany Rainimamonjy. Nantsoina ireo izay te-hiombona latabatra amin’ny Tompo ho avy ny alahady faharoan’ny volana desambra. Nentanina ihany koa izay te-hiditra ho mpianatra SEFALA. Ny fanadinana ho Mpitandrina koa efa azo omanina hahafahana manaraka ny fiofanana. Nasian-teny ihany koa ny fanatanjahantena ho an’ny amboaran’ny Filohan’ny FJKM, ilaina ny Fiangonana mampahery ny tanorantsika mpilalao izay tafakatra ampahefa-dalana, hifanotrona sy hifampitondra amim-bavaka. Namafisina ny fiarahabana ny Mpitandrina hitory Teny izay efa nataon’ny mpitarika teny am-piandohan’ny fotoam-bavaka. Rehefa izay dia nisy fanoloran-jaza.
FF 7 “Tsy hainay ny hangina” no hira nataon’ny Fiangonana nandritra ny firosoana teny amin’ny alitara noho ny fanolorana ny zaza Rasitrakiniaina Saotra Arimino. Vita izany dia notohizana tamin’ny famakiana ny fangataham-bavaky ny mpianakavin’ny finoana ny fotoana.
Ranaivoson Jacky no nitarika izany. APO 3 : 16 no andinin-tSoratra Masina novakiany mialoha ny fanononana ny fanati-pisaorana.
Ireto avy ny hira nangatahan’ny Fiangonana : FFPM 538 : 1 “Finaritra ny masoko” ; FF 26 : 2 “Jesosy reharehako” ; FF 12 : 1 “Am-pelatananao”.
Ireo mpianavin’ny finoana ireo dia nisaotra sy nangata-bavaka : renim-pianakaviana nahazo fahasoavana ; nahatratra ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany ; afa-panadinana ; fianakaviana mahatsiaro notahiana.
Natolotra ny rakitra tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 283 : 3 « Manan-jara, ry Jesosy ». Ireo SAMPATI nandray ny rakitra faharoa teo amin’ny alitara dia Rakotomalala Franck sy Rakotondrainibe Tsiry Nitohy avy hatrany ny fotoana tamin’ny firedonana ny hira FFPM 226 « Tompo ô! Mba te-hihaona ».
Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina Rtoakely RAZARASOA Josie, Tonia. Ny perikopa voalahatra eo amin’ny sahan’ny FJKM androany dia araka ny ao amin’ny ISA 35 : 3-10 ; MAR 13 : 24-27 ; JOD 14-15. Rtoakely RAZARASOA Josie ihany no namaky ny Testamenta taloha raha Atoa RANDRIANANDRASANA MAMISOA David, Tonia no namaky ny Testamenta Vaovao. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFFPM 190 : 1-2“Ry Fanahy mpanazava” ka toriteny no nanaraka izany.
Taorian’ny fiarahabana dia nasain’ny mpitory Teny nijery ny eo akaiky ny Fiangonana ka nifampitsiky sy nifampahery. ISA 35 : 3-10 no andinin-tSoratra Masina naverina novakiana, ka ny vehivavy rehetra nasaina namaky ny tapany voalohany raha ny lehilahy rehetra no nampamakiana ny tapany faharoa. Ho avy ny Tompo : mampahery anao Izy, mampandresy anao Izy, mampifaly anao Izy fa iraka no ataony. Naniraka ireo voahosotra Izy hitondra Teny fampanantenana. Tsy milamina ny fiainana rehefa manara-dia an’Andriamanitra, arakaraky ny irosoana no manahirana, ento eo amin’ny hazofijaliana izany. Mila faharetana izany. Ny zanak’Israely izay babo tany Babylona dia nampaherezina, misy adim-panahy, miatrika olana kivy, malahelo satria tsy manana fahafahana tanteraka, rava ny tempoly. Mamerina ao an-tsaintsika Andriamanitra fa mijery antsika Izy, manatrika, mihaino, mahita ny fahoriantsika sy ny hetahetantsika Izy.
Andriamanitra mampahery : mampitraka, mamerina ny fanantenana, mampisy hery vaovao, mampiakatra ny finoana, mamafa ny ranomason’izay mitomany. Iza no sahy hilaza ho tsy manana olana ? Tsy maintsy mandala izany ianao fa Ilay Andriamanitra avy amin’ny heriny dia Andriamanitra mampijery anao indray ny hoavy izay tena misy fanantenana, apetraho eo amin’ny Tompo ny fiainana fa mandala ihany izao fiainana izao. Voafetra daholo izay mety ananana (fananana sy fotoana). Andeha hifankatia tokoa isika Fiangonana dia ho tratratsika ny fisandratra, andao hifankahery : raha mahery ianao, ampaherezo koa ny hafa. Jereo ny eo akaikinao dia lazao fampaherezana izy. Misy ray aman-dreny sarotra hajaina sy miavona, mila mifankatia, mifanaja, mifanampy, misy lohalika efa tsy-te hitsangana, reraka am-panahy.
Mpandresy ianao : miady aloha, tsy misy mpandresy tsy miady izany, tanteraka tao amin’i Jesoa Kristy ny ady ilay nandresy ny fahafatesana. Tsy mora ny atrehina. Tsarovy fa mpandresy ianao. Samy manana ny olany any an-trano. Maro ny ady saingy afaka mijoro vavolombelona ny mino fa misy fandresena na eo aza izany. Rehefa tena vonona hiroso amin’ny asan’Andriamanitra tsy mora ny ady atrehana, rehefa. Andriamanitra no momba anao iza no hahatotohitra anao? Asa mesianika izany. Mpandresy ianao, rehefa misy olona tsy mamela anao hahomby dia Andriamanitra mihitsy no miditra an-tsehatra? Miaina ny fiainam-pifaliana ianao rehefa avy nandresy, mandosotra ny alahelo, ny sento satria ianao ilay navotan’i Jehovah izay mahatsiaro izany fanavotana izany ihany no afaka mifaly na inona olana eo amin’ny fiainana ka afaka midera an’Andriamanitra mandrakariva.
Tsy mampanenina ny manao skoto. Ny fanabeazana izay ataon’ny mpiandraikitra dia asa masina sy miavaka hijerena ny maha-izy azy ny tsirairay, manomana ny hoavy, hanompo an’Andriamanitra hiasa ho an’ny tanindrazana, ny hahatonga ho vavona eo anivon’ny fiarahamonina : fanahy, vatana, saina, fa mbola misy ny fihetsehampo (miomàna mandrakariva amin’ny fahadisoam-panantenana). Tsy mora ny fanabeazana fa isaorana Andriamanitra nampisy ny mpanazava sy tily eo amin’ny Fiangonana, soatoviana skoto mihitsy ny fanajana. Pasteur Ramino Paul dia nilomano tamin’izany skotisma izany, ataovy ho zava-dehibe izany fanabeazana izany, ianao no toy izany dia ny fanabeazana noho izany aza atao tsinontsinona izany, ampanadrosoy ny SAMPATI ho fampandrosoana ny Fiangonana sy ny firenena;
Ho avy ny Tompo : mahereza, handresy ianao, mifalia, ataovy ho zava-dehibe ny fanabeazana.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena!
Nisy feon-javamaneno narahin’ny hiran’ny Sampana Tanora Kristiana. Rehefa izay dia niroso tamin’ny vavaka fangataham-pitahiana ny efa niomana tamin’izany.
Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana. Nisaotra noho ny toriteny izy mba hiainana izany, nitondra amim-bavaka ny Fiangonana rehetra sy ny mpitondra azy ; ny mpitory Filazantsara ; ny kristiana rehetra eto amin’ny fitandremana hahazo hery ; ho mpandresy sy hanana fifaliana ; ny asan’ny Fiangonana kasaina hatao amin’ny herinandro ;ny Tonian’ny SAMPATI Foibe avy nitory Teny sy ny ankohonany ary ny asany ; ny SAMPATI manontolo ; ny vahiny rehetra manatrika izao fotoana izao ; ny FDL avy any Ambonivohitra Oliva ; ny tanora mpanao fanatanjahantena ho an’ny amboaran’ny Filohan’ny FJKM ; izay manam-pikasana hiditra SEFALA ; izay hiomana ho Mpitandrrina ; ireo hiditra katekomena vaovao ; ireo solontenan’ny Fiangonana ho any amin’ny TPM Fianarantsoa hanolotra fanampiana ; ireo sahirana ; marary ; mana-manjo ; ny azon’ny tsy fidiny ; ireo manana hataka manokana ; ny tompon’andraikitra ao amin’ny Foibe FJKM ; ireo nanao raki-pisaorana sy nagata-bavaka, vavaka izay nofaranany tamin’ny “Rainay izay any an-danitra”. Asa Vavolombelona no tohiny.
Nizara roa ny fotoanan’ny Asa Vavolombelona dia ny fanolorana ny sakramentan’ny batisa sy fanolorana mpiandraikitra SAMPATI. FFPM 248 : 1 “Nitondra ny zaza ny reny” no hiran’ny Fiangonana nandritra ny fandrosoan’ny ray aman-dreny sy zaza teny amin’ny alitara ho amin’ny batisa.
Ireto avy ny zaza natolotry ny ray aman-dreniny nandray ny sakramentan’ny batisa : Raoelijaona Harena Ihavian’ny Soa ; Ramanohisoa Mikolofitia Lofomahefa ; Ramanohisoa Mahatehotia Tokinantenaina.
Rehefa izay dia ny Asa Vavolombelona faharoa no nanohizana ny fotoana, momba ny fitondrana am-bavaka sy fandraisan-tanana ary fitsofandrano ireo Mpiandraikitra Mpanabe hiandraikitra ny taom-panabeazana 2019-2020 izay notarihin-dRamananarivo Parany. Rehefa voatolotra tsirairay ny anaran’ireo mpiandraikitra ireo izay nijoro teo amin’ny alitara di any Tonia no nitondra amim-bavaka sy nitsodrano azy ireo. Rehefa izay dia noraisin-tanana ireo tanora ireo. Indro ny anaran’izy ireo sy ny andraikiny avy :
FANABEAZANA ZAZAVAVY – MPANAZAVA - TONIA MPANAZAVA : RAZARASOA Josie
Sampana Mavo VORONKELY 6-11 Taona : RAZAFINDRAVELONA Fenitra -RAZAFIMAHARO Kantoniaina – RAKOTOARISOA Fanomezantsoa
Sampana Maitso MPANAZAVA 12-15 Taona : ANDRIANARY Mirantsoa – RANDRIANASOLO Kantonioly – RAKOTONIAINA Fitia Malala -RABENANDRASANA Haingotiana
Sampana Mena AFO 16 Taona mihoatra : RASOANARIVO Koloina -RAZAFINDRASATA Tsiky
FANABEAZANA ZAZALAHY TILY - TONIA TILY : RANDRIANANDRASANA Mamisoa Davida "Siely miarana"
Sampana Mavo TILY LOVITAO 6-11 Taona : RAZANADRAKOTO Johan – ANDRIAMAHATANA Cindy – RAVONIARISOA Fitia Baliaka – RAKOTOMAVO Mirana – RAKOTOARIJAONA Aina Tsanta
Sampana Maitso TILY 12-16 Taona : ANDRIAMAHATANA Tombo « Henjy mahily » – RADIMIMANANA Rivo Itokiana « Filoala Milefitra »- RANDRIAFARA Miranto « Kantsy magnoa »- RANAIVO RAHAMEFY Radoniaina « Sianga ranitra »
Sampana Mena MPIANDALANA 17 Taona mihoatra : RANAIVOARIVELO Dynot -RAKOARISOA Fanilo « Kipoy mihongy » – RABESON Rindra « Faniky mahatoky »
Natao ny hira FFPM 427 : 1-3 « Ho vavolombelonao » dia notononina ny tondrozotra 2019 ao amin’ny JAK 1 : 4 ; I KOR 16 : 13 ; MAT 24 : 13. Natolotry ny Mpitandrina amperinasa ny tsodrano dia noredonina ny hira 336 : 1 « Ampodio izahay, Jehovah ». Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 11 ora sy 53 minitra ny fotoana ka nitohy tamin’ny fivorian’ny ankatoky ny Fandraisana izany.
Nitendry orga : Ramahandry Mamy sy Rajaofetra Seta niarahana tamin’ny tanoran’ny SAMPATI
Fafana : Rajaofetra Voahangy
Diakona tompon’anjara sy mpanampy : Vaomieran’ny Fifandraisana, Vaomieran’ny Asa Vavolombelona
Naka sary : Harentsoa Rova